IHarmony Iphehlelela iNdawo yokuDibanisa iMisebenzi yezeMisebenzi… Srsly | Martech Zone
Iindawo zokukhangela uYobhi ziyinto elishumi elinambini. Baninzi kakhulu abambalwa kubo abade bazame ukwahlula ngokwabo ngokuthi, "yiHarmony" yemisebenzi. Ngoku ka UGqirha Neil Clark Warren, umsunguli we eHarmony, “Akunjalo.” Ngoku inkampani yakhe inemveliso esemthethweni yokuyibonisa kwaye yindlela ebukhali ngakumbi kwaye ephucukileyo kunokuba ucinga.
UWarren kunye neqela lakhe lemveliso basungule imisebenzi ePhakamileyo yi-eHarmony eLos Angeles kwiveki ephelileyo. (Ukubhengeza, bangabaxhasi be-PR Elasticity, ifemi endiyisebenzelayo, ngokusebenzisa iiQhinga leBranded.) Iqonga lithatha indlela yokutshatisa i-algorithm kwiqonga labo lokuqala kwaye liyisebenzise kwingxaki ehambelana nomsebenzi. Kodwa babenononophelo lokuchaza ukuba ayisiyiyo i-algorithm yokuthandana / yomtshato exineneyo kwindawo yokukhangela umsebenzi.
"Sisebenzise ifilosofi efanayo kumava ethu sakha i-injini ye-eHarmony kwaye sabuza imibuzo efanayo malunga nokuthelekiswa kwemisebenzi," ucacisile uSteve Carter, uSekela-Mongameli we-Matching eHarmony, kodwa ubukhulu becala ujongene netekhnoloji emva kweKholeji ePhakamileyo. Yena neqela lakhe bakha ialgorithm eyahlukileyo ethatha idatha kumntu ofuna umsebenzi kunye nedatha evela kubaqeshi abanokubakho kwaye iyazifanisa kunye nezinto eziphambili ezili-16, kakhulu njengezinto ezingama-29 zobudlelwane ezisebenzisa uphando lwabo kwimveliso yeHarmony. Izinto ezili-16 ngokuqinisekileyo zinobunini, kodwa ziwela kwiibhakethi ezintathu eziphambili ekugxilwe kuzo: Ubuntu, iNkcubeko kunye noBudlelwane.
Ke ukuyibilisa, benze inkonzo ehambelana nomsebenzi, hayi inkonzo yokufuna umsebenzi, ezinokuthi zihlawulwe ziinkampani ukubhalisela ukusukela, ithiyori, inokunceda umbutho uqeshe abasebenzi abalunge ngakumbi, banethuba elingakumbi uphumelele kwaye uhlale kunye nenkampani ixesha elide. Oko akunakwandisa kuphela imveliso kodwa kunciphise iindleko ezimangalisayo zokuqesha abantu abatsha. Ingeniso, njengoko besitsho kwilizwe le-HR, yinto encinci.
Abafuna umsebenzi banokuyisebenzisa simahla indawo kwaye inephepha lemibuzo elilindelweyo lomntu kwinkqubo yokukhwela. Ukusuka apho, le ndawo icebisa abaqeshi ukuba iya kuba ilungele ubuntu bakho, iimfuno zenkcubeko, amava kunye nokunye. Ukuba ukhe wawuthatha umsebenzi ukuze uqaphele ngokukhawuleza ukuba awulungelanga ngokwenyani okanye uyayithanda inkcubeko, ungabona izibonelelo ezizodwa zento enje.
Kwaye njengoko ubunokulindela kwingcali yobudlelwane, uWarren wagxotha zonke iintlobo zonxibelelwano ezinomdla kunye neenkcukacha-manani malunga nokuba awonwabanga kangakanani emsebenzini wakho, ogcwele kubomi bakho bobuqu, ubudlelwane, impilo kunye nokunye. Ke, ubukhulu becala, iMisebenzi ePhakamileyo ingathi inokunceda inkampani ukuba ibe nabasebenzi abonwabileyo abaphila ubomi obonwabisayo kunye ne-yada yada.
Imibuzo yam, endiyibeka kuwe kwaye ndingayithanda impendulo yakho kwizimvo, zezi:
Ngaba isayikholojisti yabantu kunye nobudlelwane ngokwenene bunokubiliswa kwi-algorithm eqhutywa luvavanyo? Ukuba ngabaphulaphuli be-tech-savvy, uqikelelo lwam ungathi "ewe" kodwa uthini ngempazamo yomntu ekungeneni? Xa ndikhangela umsebenzi, ndikulungele ngakumbi ukutsho ukuba ndicinga ukuba inkampani ifuna ntoni kunaleyo ndiziva ngayo, ndicinga okanye ndikholelwa ngam njengomgqatswa. Ngelixa amakhondo aphakamileyo engamiselwanga njenge-resume okanye indawo yokukhangela, imeko egcwalisa le fomu izakuba yenye yazo, “Ndicinga ukuba ngaba abaqeshi bafuna ndithini?”
Iinkampani zamkela itekhnoloji yayo yonke into ukusuka kwintengiso ukuya kwintengiso kunye nangaphaya. Kodwa ngaba bakulungele ukuthembela kwi-algorithm yokukhetha, okanye yokukhetha, abo banokuba ngabagqatswa bomsebenzi? Ngokuqinisekileyo kungcono kunokujonga iphepha labo le-Facebook kwimifanekiso ye-bong bong, kunye nokuPhakanyiswa kweMisebenzi ePhakamileyo akuyi kuba sisigqibo sokugqibela sokuqesha nabani na, kodwa ukulungele kangakanani ukutyala imali kwitekhnoloji kukusebenza kwe-HR, ngokwenene?
Kwenzeka ntoni kubaqeshi abahlawulwa ukuze babeke abagqatswa xa ubuntu / inkcubeko / ulwalamano lomdlalo lusenokusebenza ngokuchasene nabafuna umsebenzi?
Ungaya kude kangakanani le ndlela? Ngaba singayiphuhlisa ialgorithm yokutshatisa iiarhente kunye nabaxumi? (Ndingathanda ukubona loo datha. Heh.) Ngokuqinisekileyo le ndlela inye inokusebenza kubudlelwane babathengisi kunye namaqabane. Kodwa ifuna inqanaba elithile lovavanyo lomntu wesithathu wemibutho ebandakanyekayo. Zingaphi iinkampani eziya kuthi zivule iminyango yazo kuvavanyo lobuntu bombutho?
Ndifumana imisebenzi ePhakamileyo inomdla. Kuya kuba mnandi ukuyibona isebenza. Umbuzo wokwenene uhlala: Ucinga ntoni? Ngaba ungayisebenzisa njengomphathi wokuqesha ukuba unokufikelela? Ngaba ungayisebenzisa njengomntu ofuna umsebenzi? Izimvo zezakho.
tags: algorithmeHarmonyimisebenzi ephakamileyoItekhnoloji ye-HRezengqeshoukuthelekisa umsebenziiteknoloji efanayo
UJason Falls yiSVP yesiCwangciso seDijithali e Elasticity, inkampani yentengiso yedijithali eneeofisi eSt. Louis, Chicago naseLouisville. Umbhali weencwadi ezimbini kwintengiso yedijithali, isithethi esiphambili rhoqo kwisihloko kunye nohlalutyo lwetekhnoloji yezentlalo. Nxibelelana naye kwi iindawo zokuwa kunxibelelwano lwentlalo.
Epreli 11, 2016 ngo-11: 23 AM
Jason - ingaba ikhona iURL yesiza esitsha?